अक्षय–आमिर–शाहरुख–सलमान, किन गर्दैनन् प्रियंकासँग काम ? -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०७७ समय: १९:१९:४९
विवाह अघि नै प्रियंका चोपडालाई हिन्दी फिल्ममा काम देखिन थालिएको थियो । यद्यपि, विवाह पछि पनि उनले आफ्नो अभिनय कलालाई जारी राखेकी छिन् तर बलिउडका थप्रै ठूला कलाकार, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमारजस्ता कलाकार उनीसँग फिल्म गर्न चाहँदैनन् तसर्थ प्रियंकाले ठूला बजेटका फिल्म पाइरहेकी छैनन् । आखिर यसको कारण के हुनसक्ला ?
प्रियंका अभिनय जगतमा आएको धेरै समय बितिसकेको छ तर उनले अहिलेसम्म आमिर खानसँग फिल्ममा अभिनय गरेका छैनन् । हुन त आमिर आफैं पनि निकै कम फिल्म गर्छन् र उनको नायिका बन्ने अवसर धेरैले पाउँदैनन् । तर आमिर पनि प्रियंकासँग अज्ञात कारणले रुष्ट छन् । एक–दुई फिल्ममा आमिरका निर्माताले प्रियंकाको नाम उनलाई सुझाएका थिए तर उनले प्रियंकालाई कहिले पनि रोजेनन् । अर्थात्, बलिउडका तीन सुपर खानमध्ये कसैले पनि प्रियंकासँग काम गर्न चाहँदैनन् ।